06/11/2018 - Page 3 sur 4 -
Fampandrosoana : Nanome vola 42,2 tapitrisa Euros i Alemana
Ho fanampiana sy ho fampandrosoana ny firenena, nanolotra vola mitentina 42,2 tapitrisa Euros an’i Madagasikara i Alemana. Tontosa omaly, teny amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny (MAE) ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa eo amin’ny Madagasikara sy Alemana tamin’ny alalan’ny minisitry ny …Tohiny
Mialohan’ ny hiatrehana fifidianana : Natao hisainana anio
Mazava ny voalazan’ ny lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra, fa tapitra iray andro alohan’ ny fotoam-pifidianana, izany hoe ny alatsinainy amin’ ny 12 ora alina ny fampielezan-kevitra. Noho izany dia ilaina ny manaja io fahanginana io, …Tohiny
Fifidianana anatin’ny rivodoza : Ho sahirana ny CENI
Ho sahirana tanteraka izany ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana amin’ ny fanangonam-bokatra, amin’ ity fifidianana 2018 ity noho ny fiavian’ny rivodoza. Raha ny nambaran’ ny sampana mpamantatra ny toetr’andro, dia afaka dimy andro …Tohiny
Ho tapitra anio ny fiomanana mialoha ny fifidianana. Efa tafapetraka avokoa ny lamina rehetra hiatrehana ny androm- pifidianana amin’ny 7 novambra. Manodidina ny 2517 ny mpitandro filaminana hiantoka ny fiambenana ny tananan’Antananarivo tsy hisian’ny fikorontanana. …Tohiny
Niala maina hatrany ry Miara-manonja tamin’ny fanakorontanana rehetra nataony teto an-drenivohitra. Fanakorontanana ny firenena tokoa mantsy no tanjon’ireto mpitarika ireto, fa mody sarontsaronana amin’ny fitakiana amin’ny maha mpanao gazety. Porofon’izany misora-tena ho mahasolo tena ny ...Tohiny
DG OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus : Nankasitraka ny ezaka vitan’ny Filoha
Fifidianana filoham-pirenena : 12 ireo kandida
Orinasa COPS : MAMPIAHIAHY TANTERAKA